Ụdị Lambda dị iche: na -eguzogide ọgwụ yana ọ na -efe efe karịa?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ụdị Lambda dị iche: na -eguzogide ọgwụ yana ọ na -efe efe karịa?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
COVID-19 dị iche
Nwa atụrụ Lambda nke COVID-19 nwere ike ịbụ nrịgo elu site na Delta Variant dị ugbu a, na-enyo enyo na ọ kpatara mgbanwe nnyefe ma ọ bụ bute ọrịa siri ike.
Agbanyeghị, a ka na -enyocha ya. Nnyocha ụlọ nyocha na-egosi na o nwere mmụba nke na-eguzogide ọgwụ mgbochi nje kpatara.
Ọdịiche Lambda adọtala uche dị ka ihe egwu nwere ike na mmepe nke ọrịa COVID-19
Ọdịiche Lambda nke coronavirus, nke ebu ụzọ mata na Peru na Disemba, nwere ike ịlaghachi azụ, mana nwekwara ohere nke bute ọrịa siri ike ma ọ bụrụ na akwụsịghị ya. Achọpụtala ikpe na Texas na South Carolina, yana na 81% nke ikpe achọtara na Peru.
Ọdịdị nke Lambda nwere mmụba na -egbochi ọgwụ mgbochi.
Mgbanwe abụọ dị na ụdị Lambda - T76I na L452Q - na -eme ka ọ na -efe efe karịa ụdị COVID nke gafere ụwa na 2020.
Nkwubi okwu ọmụmụ a dabara na nchoputa nke otu otu na Chile chọpụtara na ụdị ahụ nwekwara ike gbanahụ ọgwụ mgbochi ọrịa, Njikwa Ọrịa Chile kọrọ.
Ndị ọgbọ atụlebeghị akụkọ a.
Otu ụdị COVID-19 nke na-egosi na ọ na-eguzogide ọgwụ mgbochi na-eme ka ndị ọkachamara ahụike, ndị ọrụ ahụike ọha, na ndị ọrụ nlekọta ahụike nọ n'ihu agha COVID-19 na-ebili n'abalị.
Kedu ihe dị iche na Lambda dị ka ọmụmụ si Chile si dị?
Mụrụ Ahịrị ọhụrụ SARS-CoV-2 C.37 bụ nke WHO (Lambda variant) kọwara n'oge na-adịbeghị anya dị ka ụdị mmasị dabere na ọnụego mgbasa ya dị elu na mba Ndịda America yana ọnụnọ mgbanwe dị oke mkpa na protein. Mmetụta nke mmụba dị otú ahụ na -ebute ọrịa na ụzọ mgbapụ na -alụso ọrịa ọgụ site na -egbochi ọgwụ mgbochi.
ụzọ Anyị mere nyocha nnọpụiche nke nje pseudotyped wee chọpụta mmetụta nke ụdị Lambda dị na ọrịa na mgbapụ na-enweghị mgbochi site na iji nlele plasma sitere n'aka ndị ọrụ ahụike (HCW) site na ogige abụọ dị na Santiago, Chile bụ ndị natara atụmatụ usoro abụọ nke ọgwụ mgbochi nje CoronaVac.
Anyị hụrụ ọnya mmụba nke protein Lambda spike nke dị elu karịa nke D614G (usoro ọmụmụ B) ma ọ bụ ụdị Alfa na Gamma. Tụnyere ụdị anụ ọhịa (usoro A), neutralization belatara site na 3.05-fold maka ụdị Lambda ebe ọ bụ 2.33 maka ụdị Gamma na 2.03 maka mpịakọta Alfa.
Mkpebi Nsonaazụ anyị na -egosi na mmụba nke dị na protein ọkụ nke ụdị Lambda nwere mmasị na -eme ka ịbawanye ọrịa na ụzọ mgbapụ site na iwepụ ọgwụ mgbochi nke CoronaVac kpatara. Data ndị a na-eme ka echiche ahụ sie ike na nnukwu mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na mba ndị nwere mgbasa SARS-CoV-2 dị elu ga-esonyere na nlebara anya nke mkpụrụ ndụ ihe nketa na-enye ohere ịchọpụta njirimara ọhụrụ na-ebu mmụba oke na ọmụmụ ihe gbasara ọgwụ mgbochi iji chọpụta mmetụta mgbanwe ndị a na mgbapụ mgbochi ọrịa na ọgwụ mgbochi ọrịa.
Mmalite nke ụdị nchegbu SARS-CoV-2 na ụdị mmasị dị iche iche abụrụla ihe ngosi nke oria ojoo COVID-19 n'oge 2021.
Ahịrị ọhụrụ SARS-CoV-2 C.37 bụ nke WHO kewara na nso nso a dị ka mmasị dị iche iche na June 14th A na -akpọkwa ya dị ka ụdị Lambda. A kọwo ọnụnọ nke ụdị ọhụrụ a n'ihe karịrị mba iri abụọ dị ka ọnwa Juun 20 na ọtụtụ usoro dịnụ na -esite na mba South America, ọkachasị na Chile, Peru, Ecuador na Argentina.5. Ihe e ji amata ọdịiche ọhụrụ a bụ ọnụnọ nke nhichapụ na-agbanwe agbanwe na mkpụrụ ndụ ORF1a (Δ3675-3677) akọwapụtara na Beta na Gamma ụdị nchegbu na mmụba Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, T859N na protein zuru oke6. Mmetụta nke mmụba mmụba ndị a na -ebute ọrịa na ụzọ mgbapụ iji kpochapụ ọgwụ mgbochi.
Chile nọ ugbu a na -enwe nnukwu usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Dabere na data ọha sitere na Ministry of Health nke Chile dị ka ọnwa June 27 dịth 2021, 65.6% nke ndị eburu n'uche (afọ 18 na karịa) enwetala atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi7. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu (78.2%) nke ndị gbara ọgwụ mgbochi zuru oke anatala usoro onunu ogwu nke ọgwụ nje CoronaVac na -adịghị arụ ọrụ, nke akọburu na ọ na -ebute ọgwụ mgbochi mana na obere tite ma e jiri ya tụnyere plasma ma ọ bụ sera n'aka ndị mmadụ.
N'ebe a, anyị jiri nyocha nnwere onwe nke nje pseudotyped akọwapụtara na mbụ12 iji chọpụta mmetụta nke ụdị Lambda dị na mmeghachi omume mgbochi mgbochi nke ọgwụ mgbochi nje CoronaVac kpatara. Ihe data anyị na -egosi na mmụba dị na protein dị elu nke ụdị Lambda na -eme ka ọrịa na -arịwanye elu ma gbanahụ iji kpochapụ ọgwụ mgbochi nje CoronaVac na -akpata.
A kpọrọ ndị ọrụ nlekọta ahụike sitere na saịtị abụọ dị na Santiago, Chile ka ha sonye. Ndị ọrụ afọ ofufo nwetara usoro onunu abụọ nke CoronaVac, a na-enye ọgwụ nke ọ bụla ụbọchị iri abụọ na asatọ dị ka mmemme ịgba ọgwụ mgbochi nke Chile si dị. A nakọtara mkpokọta plasma n'etiti Mee na June 28. Ndị niile sonyere bịanyere aka n'akwụkwọ nkwenye tupu eme usoro ọmụmụ ọ bụla.